စွန့်ပစ်ခြင်းကို ခံခဲ့ရပေမယ့် သခင်တွေဆီကို အရောက်ပြန်လာခဲ့တဲ့ တိရိစ္ဆာန်လေးတွေ အကြောင်း - Shwe Khit Online TV
HomeAmazingစွန့်ပစ်ခြင်းကို ခံခဲ့ရပေမယ့် သခင်တွေဆီကို အရောက်ပြန်လာခဲ့တဲ့ တိရိစ္ဆာန်လေးတွေ အကြောင်း
July 18, 2021 Yan Amazing 0
အခုတစ်ခေါက်မှာတော့ Shwe Khit ပရိသတ်ကြီးကို ပြောပြပေးချင်တဲ့ အကြောင်းအရာလေးကတော့ စွန့်ပစ်ခြင်းကို ခံခဲ့ရပေမယ့် သခင်တွေဆီကို အရောက်ပြန်လာခဲ့တဲ့ တိရိစ္ဆာန်လေးတွေ အကြောင်းပဲ ဖြစ်ပါတယ် ။ ဒီအထဲမှာပါတဲ့ အိမ်မွေး တိရစ္ဆာန်လေးတွေဟာ သူတို့သခင်ဆီကို ဘယ်လို ခက်ခက်ခဲခဲ ပြန်ရောက်လာတယ်ဆိုတာလေးတွေကို ပြောပြပေးထားတာမို့လို့ တစ်ခုချင်းစီ ဖတ်ကြည့်လိုက်ပါဦးနော် …. shwekhitonlinetv.com
၁ ။ မိုင်ပေါင်း ၂၀၀၀ ကျော် ခရီးနှင်ပြီး အိမ်ပြန်ရောက်လာတဲ့ ခွေးကလေး
( ၁၉၂၃ ) ခုနှစ်တွေတုန်းက ဘောဘီလို့ခေါ်တဲ့ ခွေးကလေးဟာ သူ့သခင်မိသားစုတွေနဲ့အတူ အင်ဒီယာနာ ပြည်နယ်ကို ခရီးထွက်လာခဲ့ပါတယ် ။ ဒါပေမယ့် ခရီးတစ်နေရာ အရောက်မှာတော့ ဘော်ဘီဟာ သူ့သခင်တွေနဲ့ ကွဲသွားပြီး ပျောက်ဆုံးသွားခဲ့ပါတယ် ။ သခင်ဖြစ်သူ မိသားစုကလည်း သူတို့ရဲ့ အချစ်တော် ခွေးလေးကို နေရာအနှံ့ လိုက်ရှာကြပေမယ့်လည်း ဘော်ဘီကိုတော့ ရှာလို့ မတွေ့ခဲ့ကြပါဘူး ။ နောက်ဆုံးမှာတော့ သခင်ဖြစ်သူလည်း လက်လျော့ပြီး သူတို့နေထိုင်ရာ အော်ရီဂွန်ပြည်နယ်ကို ပြန်သွားကြပါတယ် ။ shwekhitonlinetv.com
ကံကောင်းစွာနဲ့ပဲ နောက်ထပ် ( ၆ ) လ ကျော်ကြာ မြင့်သွားပြီးနောက် ဘော်ဘီဟာ သခင်ဖြစ်သူ အိမ်ရဲ့ လှေကားလေးမှာ စောင့်နေတာကို အံ့အားသင့်စွာ တွေ့ရှိခဲ့ကြပါတယ် ။ ဘော်ဘီ့ရဲ့ ခြေထောက်တွေဟာ သွေးထွက်သံယို ဖြစ်နေပြီး အတော်လေးကို ပင်ပန်းနေတဲ့ ပုံပေါက်နေတာပါ ။
ဘော်ဘီဟာ သူ့သခင်ဆီကို အရောက်ပြန်လာဖို့အတွက် မိုင်ပေါင်း ( ၂၂၂၅ ) မိုင်ကျော် ကွာဝေးတဲ့ ခရီးကို ဆောင်းတွင်းကြီးမှာ ခရီးနှင်လာခဲ့ရတာပဲ ဖြစ်ပါတယ် ။ တွက်ချက်မှုတွေအရ အင်ဒီယာနား ပြည်နယ်ကနေ အော်ရီဂွန်ပြည်နယ်ကို ပြန်ရောက်နိုင်ဖို့အတွက် ဘော်ဘီဟာ တစ်နေ့ကို ( ၁၄ ) မိုင်နှုန်း လျှောက်လာရမှာပဲ ဖြစ်ပါတယ် ။ shwekhitonlinetv.com
အော်ရီဂွန် မှာရှိတဲ့ အဖွဲ့အစည်းကတော့ ဘော်ဘီရဲ့ အဖြစ်အပျက်ကို အစပိုင်းက မယုံကြည်ခဲ့ပဲ စစ်ဆေးမှုတွေ ပြုလုပ်ပြီးမှသာ ၁၀၀ ရာခိုင်းနှုန်း အပြည့်အ၀ယုံကြည်သွားပြီး တအံ့တဩ လက်ခံ ခဲ့ကြပါတယ် ။ ဘော်ဘီ လေးရဲ့ အဖြစ်ဟာ အမေရိကန်နိုင်ငံတစ်ခွင် ပျံ့နှံ့သွားခဲ့ပြီး သူ့အကြောင်းကို ရုပ်ရှင်ရိုက်ထားသော “The Call of the West ” အမည်ရှိ ဇာတ်ကားလည်း ထွက်ရှိခဲ့ပါတယ် ။
ဒါ့အပြင် ဘော်ဘီ နေထိုင်တဲ့ Silverton မြို့လေးမှာ သူ့ကို ဂုဏ်ပြုထားတဲ့ ပန်းချီတွေ ၊ ရုပ်တုတွေကိုလည်း ယနေ့အချိန်အထိ တွေ့မြင်နေရဆဲ ဖြစ်ပါတယ် ။ shwekhitonlinetv.com
၂ ။ အနောက်ဂျာမနီ ကနေ သခင်ရှိရာ ပြင်သစ်နိုင်ငံကို အရောက်ပြန်လာတဲ့ ကြောင်ကလေး
( ၁၉၈၇ ) ခုနှစ်တုန်းက ပြင်သစ်နိုင်ငံမှာ နေထိုင်တဲ့ Madeleine Martinet လို့ခေါ်တဲ့ အမျိုးသမီးဟာ သူမမွေးထားတဲ့ ကြောင်အထီးလေး Gribouille ကို အတော်လေးကို ချစ်ရှာသူ တစ်ယောက်ပဲ ဖြစ်ပါတယ် ။ တစ်ရက်မှာတော့ သူမဟာ ကြောင်လေး Gribouille ကို ကောင်းမွန်စွာ ကျွေးမွေးဖို့ ငွေကြေးအထောက်အပံ့ မရှိတော့တာကြောင့် အိမ်နီးချင်းဖြစ်သူ Jean-Paul Marquart ကို မွေးစားဖို့ ပေးခဲ့လိုက်ပါတယ် ။ shwekhitonlinetv.com
လ အတော်ကြာ သွားပြီး နောက်မှာတော့ အိမ်နီးချင်း ဖြစ်သူ Marquart ဟာ ပြင်သစ်ကနေ မိုင် ( ၂၀၀ ) ကျော်ကွာဝေးတဲ့ အနောက်ဂျာမနီကို ပြောင်းရွှေ့သွားပြီး ကြောင်လေးဖြစ်သူ Gribouille ကိုပါ အတူ ခေါ်သွားခဲ့ပါတယ် ။ ဒါပေမယ့် ကြောင်လေး Gribouille ကတော့ အနောက်ဂျာမနီ မှာ နေမပျော်ပဲ သူ့ရဲ့ သခင်ဟောင်းရှိရာ ပြင်သစ်နိုင်ငံကို ပြန်သွားခဲ့ပါတော့တယ် ။ ကြောင်လေး Gribouille ရဲ့ အိမ် အပြန်ခရီးဟာ ခရီးကြမ်း မျိုးစုံကို ဖြတ်သန်းခဲ့ရပြီး ( ၁၉၈၉ ) ခုနှစ် ဩဂုတ်လ အရောက်မှာတော့ သခင်ဟောင်းဖြစ်သူ Madeleine ရဲ့ အိမ်ကို ရောက်အောင် ပြန်လာနိုင်ခဲ့ပါတယ် ။ shwekhitonlinetv.com
ကြောင်လေး Gribouille ဟာ ခရီးပန်းမှု ဒဏ်ကြောင့် အနာတရတွေ ၊ ကိုယ်အလေးချိန် ကျသွားတာတွေ နဲ့ ကူးစက်ရောဂါကြောင့် မျက်လုံးကန်းလုနီးပါး အခြေအနေတွေနဲ့ ရင်ဆိုင်ခဲ့ရပါတယ် ။ ဒါပေမယ့်လည်း သူ့သခင် Madeleine က ပြန်လည် ကျန်းမာလာအောင် ပြုစုပေးခဲ့ပြီး အသက်ရှင်သွားခဲ့ရပါတယ် ။ ထိုအချိန်ကစပြီး ကြောင်လေး Gribouille နဲ့ သူ့ရဲ့ သခင်ဖြစ်သူ Madeleine ဟာ သူတို့ရဲ့ ဘ၀ နောက်ဆုံးအချိန်အထိ မခွဲမခွာပဲ အတူနေသွားကြပါတော့တယ် ။ shwekhitonlinetv.com
၃ ။ သူ့ရဲ့ နာမည်နဲ့ အိမ်လိပ်စာကို ပြောပြပြီး သခင့်ဆီကို ရအောင်ပြန်လာတဲ့ ကြက်တူရွေးလေး
ဒီတစ်ခါ ပြောပြမယ့် အကောင်လေးကတော့ သခင့်ဆီကို ထူးထူးဆန်းဆန်း ရောက်အောင် ပြန်လာတဲ့ ကြက်တူရွေးလေး အကြောင်းပဲ ဖြစ်ပါတယ် ။ Yosuke လို့ ခေါ်တဲ့ ကြက်တူရွေးလေးဟာ တစ်နေ့မှာတော့ လှောင်အိမ်ထဲက အိမ်အပြင်ကို ပျံထွက်ပြီး လမ်းပျောက်ကာ ပြန်မလာတတ်တော့ပဲ ဖြစ်သွားပါတယ် ။
ဒါပေမယ့် ကံကောင်းတာတစ်ခုက ကြက်တူရွေးလေး Yosuke ဟာ သခင်ဖြစ်သူ သင်ပေးထားတာကို မှတ်မိနေတာကြောင့်‌ သူ့ရဲ့ နာမည်နဲ့ အိမ်လိပ်စာကို ပြောပြပြီး အနီးနားက သူစိမ်းတွေကို အကူညီတောင်းခံ ခဲ့ပါတယ် ။ shwekhitonlinetv.com
နောက်ပိုင်းမှာတော့ ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေက ကြက်တူရွေးလေး Yosuke ကို တိရစ္ဆာန် ဆရာဝန်ဆီ ခေါ်သွားပြီး ကုသပေးခဲ့ပါတယ် ။ ဆေးရုံမှာ ကုသခံနေစဉ်အတွင်း ကြက်တူရွေးလေး ဟာ သူ့ရဲ့ အိမ်လိပ်စာအကြောင်းကို အိမ်နံပါတ်နဲ့ လမ်းနာမည်တွေက အစ အတိအကျ ပြောနေခဲ့သလို သူနာပြု ဆရာမလေးတွေကိုလည်း သီချင်းဆိုပြီး ဖျော်ဖြေပေးခဲ့ပါသေးတယ် ။ shwekhitonlinetv.com
ကုသပေးပြီးမှာတော့ သူပြောပြတဲ့ လိပ်စာ အတိုင်း ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေက ပြန်ပို့ပေးခဲ့ရာ သူ့သခင်ဆီကို ဘေးရန်ကင်းကင်းနဲ့ ပြန်ရောက်သွားခဲ့ပါတော့တယ် ။ သခင်ဖြစ်သူရဲ့ ပြောကြားချင်အရ သူတို့မိသားစုတွေဟာ ကြက်တူရွေးလေး Yosuke ကို သူနေထိုင်တဲ့ အိမ်လိပ်စာကို မှတ်မိစေဖို့အတွက် ( ၂ ) နှစ်ကျော်ကြာတဲ့ အထိ နေ့တိုင်းသင်ပေးခဲ့ရတယ်လို့ ပြောပြခဲ့ပါတယ် ။ shwekhitonlinetv.com
၄ ။ မိုင်ပေါင်း ( ၄၀ )ကျော် လမ်းလျှောက်ပြီး သခင့်ဆီ အရောက်ပြန်ခဲ့တဲ့ ခွေးကလေး
( ၂၀၀၈ ) ခုနှစ် အောက်တိုဘာလ တုန်းက Max လို့ခေါ်တဲ့ ခွေးလေးနဲ့ သူ့ရဲ့ သခင်ဖြစ်သူ Bill Clark ကားမတော်တဆမှု တစ်ခုမှာ ပါဝင်ခဲ့ပြီး သခင်ဖြစ်သူ Bill Clark ကို ကယ်ဆယ်ရေးဝန်ထမ်းတွေက ကယ်တင်ခဲ့ကြပေမယ့်လည်း ခွေးလေး Max ကိုတော့ သတိမထားမိပဲ ထားခဲ့မိလိုက်ပါတယ်တဲ့ ။
ဒီလိုနဲ့ ခွေးလေး Max ဟာ ကား အနောက်ဘက် ခုံကနေ ထွက်ကနေ Sterling အမည်ရှိ သစ်တောထဲဝင်ပြီး သူ့အိမ်ကို ပြန်ဖို့ စတင် ခရီးနှင်ပါတော့တယ် ။ shwekhitonlinetv.com
Max ဟာ သူ့သခင်နေထိုင်တဲ့ Rhode ကျွန်းစုလေးကို အရောက်ပြန်ဖို့အတွက် မိုင်ပေါင်း ( ၄၅ ) မိုင်လောက် ကို ဟိုင်းဝေးလမ်းမကြီးတွေနဲ့ လမ်းကြမ်းတစ်ချို့ကို ဖြတ်ပြီး ပြန်လာခဲ့ရတာပဲ ဖြစ်ပါတယ် ။ တစ်ဖက်မှာလည်း သခင်ဖြစ်သူ Bill Clark ကတော့ သူ့ခွေးလေး Max ကို နေရာအနှံ့ရှာဖွေ ခဲ့ပေမယ့်လည်း မတွေ့တာကြောင့် အကြီးအကျယ်ကို စိတ်ပျက်နေခဲ့ရတာပါ ။ ဒါပေမယ့် တစ်ရက်မှာတော့ ခွေးကလေး Max ဟာ အိမ်အနောက်ခြံလေးထဲမှာ ထိုင်စောင့်နေတာကို သခင်ဖြစ်သူ Bill Clark တစ်ယောက် တွေ့ရှိပြီး ဝမ်းသာသွားခဲ့ပါတော့တယ် ။ shwekhitonlinetv.com
ခွေးလေး Max ဟာ အိမ်ပြန်ရောက်ဖို့ ခရီးဝေးဝေးနှင်ခဲ့ရတာကြောင့် ကိုယ်အလေးချိန် ( ၁၁ ) ပေါင်လောက် အထိ ကျသွားခဲ့ရပါတယ် ။ သခင်ဖြစ်သူ Bill Clark ကတော့ သူ့အချစ်တော် ခွေးလေး Max တစ်ယောက် အခုလိုမျိုး အိမ်ရောက်အောင် ပြန်လာနိုင်တာဟာ တစ်ကယ့်ကို မယုံကြည်နိုင်စရာပါပဲလို့ ပြောခဲ့ပါတယ် ။ shwekhitonlinetv.com
၅ ။ သခင်ဖြစ်သူ နေထိုင်တဲ့ မြို့ကို မသိပဲနဲ့တောင် အရောက်သွားခဲ့တဲ့ ကြောင်ကလေး
နောက်ထပ် ထူးထူးခြားခြား ပြောပြပေးမယ့် အဖြစ်အပျက်လေးကတော့ ကြောင်လေး Misele ရဲ့ အကြောင်းပဲ ဖြစ်ပါတယ် ။ ကြောင်လေး Misele ရဲ့ သခင်ဖြစ်သူ Alfonse Mondry ဟာ အသက် ( ၈၂ ) နှစ် အရွယ် ရှိပြီ ဖြစ်ပြီး တစ်ရက်မှာတော့ Mondry ဟာ နာမကျန်းဖြစ်ပြီး ဖျားနာသွားတာကြောင့် မြို့ကနေ ( ၉) မိုင် အထိ ကွာသေးတဲ့ ဆေးရုံကို ပို့လိုက်ရပါတယ် ။
ဒီအချိန်မှာ ကြောင်လေး Mislele ဟာ သခင်ဖြစ်သူကို ရှာဖို့အတွက် ရှာပုံတော် ခရီးထွက်ခဲ့ပြီး ကျောက်မိုင်းတွေ ၊ သစ်တောတွေနဲ့ ဟိုင်းဝေးလမ်းမကြီးတွေကို ဖြတ်သန်းပြီး သခင်ဖြစ်သူ Mondry တက်နေတဲ့ ဆေးရုံကို အရောက်သွားခဲ့ပါတယ် ။ shwekhitonlinetv.com
တစ်ညနေခင်းမှာတော့ ဆေးရုံမှာ တာဝန်ကျနေတဲ့ သူနာပြု ဆရာမလေးဟာ သူမရဲ့ လူနာအခန်းထဲမှာ လှဲနေတဲ့ ကြောင်လေး Mislele ကို တွေ့ရှိခဲ့ပါတော့တယ်။ နောက်ပိုင်းမှာတော့ သူနာပြု ဆရာမလေးဟာ အနီးနား ဝန်းကျင် ကို မေးမြန်းခဲ့ပြီး သခင်ဖြစ်သူ Alfonse ဆီ ကြောင်လေးကို ပြန်ပေးအပ်ခဲ့ပါတယ်။
သခင်ဖြစ်သူ Alfonse ကတော့ သူ့ကြောင်လေး Misele ဟာ သူရှိနေတဲ့ ဆေးရုံကို ရောက်အောင်လာဖို့ ခရီးမိုင်ပေါင်းများစွာ ဖြတ်ပြီး လာခဲ့ရတာဆိုပြီး ဝမ်းပန်းတသာ ပြောပြခဲ့ပါတယ် ။ ကြောင်လေး Misele ရဲ့ သခင့်အပေါ် သစ္စာရှိလွန်းတဲ့ လုပ်ရပ်ကြောင့် သူ့သခင်ဖြစ်သူ Alfonse နဲ့ အတူ ကြောင်လေး Misele ကို ဆေးရုံမှာ အတူ နေဖို့ ခွင့်ပြုပေးခဲ့ပါတယ် ။ shwekhitonlinetv.com
အခုဖော်ပြပေးခဲ့တာကတော့ ခရီးမိုင်းပေါင်းများစွာ နှင်ပြီး သခင်ဖြစ်သူတွေဆီကို အရောက်ပြန်လာနိုင်ခဲ့ အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်လေးတွေ အကြောင်းပဲ ဖြစ်ပါတယ် ။ နောက်ပိုင်းတွေမှာလည်း အခုလို ထူးထူးဆန်းဆန်း အကြောင်းအရာလေးတွေကို တင်ဆက်ပေးမှာမို့လို့ Shwe Khit ကို စောင့်မျှော် ဖတ်ရှုပေးကြပါဦးနော်…. shwekhitonlinetv.com
လေပြင်းတွေ အမြဲတိုက်ခတ်နေတဲ့ ကမ္ဘာပေါ်က အရပ်ဒေသများ